सुरज चौहानको हत्या कि अत्महत्या ? – NEWS24 TV – Nepali Live – Videos & Entertainment नेपाली लाइभ
सुरज चौहानको हत्या कि अत्महत्या ? – NEWS24 TV
देशमा हिजो आज दैनिक जसो अपराधिक घटनाहरु घटिनै रहन्छन् । धेरै त यस्ता घटनाहरु पनि छ्न जसमा अपराध हो कि दुर्घटना छुट्टाउनै गरो पर्छ । यस्ता घटनाहरुको बिरलै मात्र अनुशन्धान हुन्छ र हत्यार पत्ता लाग्छन् । तर धेरै घटनाहरुमा पिडितपक्षहरु अनुशन्धानको लागि भौताँरीदा भौतारीँदै दिक्क हुन्छ ,घटनाको वास्तवीकता भने बाहीर आउँदैन । यस्तै मध्यको एक प्रतिनीधी घटना हो यो । रामेछाप फुलास घर भई स्रोहखुट्टेमा बस्ने १८ बर्षीय सुरज चौहान चैत्र १८ गते गोठाटारको पानीट्याङकीमा मृत भेटीए । परीक्षाको अन्तीम दिन साथीहरुसँग खानापान गरेर डेरामा हिडेका उनी वेपत्ता भएको २ दिन पछी पानी ट्याङकी भित्र मृत अवस्थामा भेटीए ।